5T Spool Rotator - Shiinaha Wuxi Success Makiinado
awoodda Load: 5 tons ugu badnaan
Weelasha dhexroor: Min.150mm ~ Max.900mm
xoogga wareegga: 2 * 0.37 kw la qaboojinta taageere
Dheellitir hab: fur Lead
nidaamka Control: gacanta Remote control sanduuqa
: FOB Price . 8, 00 *** USD
rotator Spool waxaa si gaar ah loogu talagalay oo soo saaray ujeedada shirka shuruudaha u qaadidda wax soo saarka, kordhinta xadka uu si toos ah, xoogga shaqada ee alxanka yaraynta iyo qabsado prefabrication workshop tuubooyin. Waxaa la qabsato dhexroor weel via fur waxa rasaasta ah, iyo hagaajin workpiece ee aan dhaqaaqayn, sidaa daraadeed waxa si weyn loo isticmaalaa in alxanka.
Halkan Hoos waxaa ku 5T Spool Alxanka Rotator faahfaahinta:
awoodda load 5 tan oo ugu badnaan
weelasha dhexroor Min. 150mm ~ Max.900mm
xoogga wareegga 2 * 0.37kw la qaboojinta taageere
jidka Control control gacanta Remote
Lead Ku marooji qabsiga Spool tuuboyinka jeestay Rolls Description:
1. alxanka design Gaarka jeestay rullaluistemadka taageeri doonaa under biibiile haddii biibiile sidoo kale waa dhererka.
2. rollers biibiile Spool qalabaysan hub Alxanka gacanta ee alxanka automatic, ccustomer qabsato karaa qoriga alxanka gudahood 10 m ku via sanduuqa gacanta gacanta.
3. tracker tollayn diyaar u qabsato alxanka kama tollayn ah.
4. Control Way: Hand sanduuqa gacanta.
5. Jidka Jarida: alxanka Automatic
6. positioner Alxanka aanan biibiile ee soo jeestay oo alxanka.
7. gacanta Alxanka qaban qoriga alxanka, waayo alxanka automatic ah.
8. alxanka nidaamka Electric waa ka Schneider
All Alxanka Rotator jeestay Rolls, yaryar iyo Rotator Large tudhi Qaybo Brand:
1.Our alxanka spool Inverter rullaluistemadka waa ka Danfoss / Yaskawa.
2.Our hogaanka sixitaanka fur Motor rotator alxanka waa ka Invertek.
3.Our ka leexdo iyo biibiile spool tirsan Isbahysiga Reducer waa ka brand Shiinaha.
1. Waxaa loo isticmaalaa in Weld, polish oo waxay urursan ee dhululubo-qolofka.
2. Alxanka Rotator waaweyn ee loo isticmaalo in alxanka dhululubo, sida Marine, Oil & Gas, Offshore, Plate Heat Iskubedelka; Lagu eedeeyay meeldhexaadka ah hawada; Markabka Cadaadis; kuleeliyaha; nidaamka biibiile & Steel shaqeeya iwm
3. goobo auto alxanka tollayn.
4.Chemical & shidaalka been taangi lagu kaydiyo.
Waa maxay sababta Dooro CO Wuxi Success Makiinado Qalabka, LTD.:
yabooha 1.We daacad ah oo xalaal ah, waxaa noo farxad inaan kuu adeegaynaa sidii la taliyaha iibsiga aad.
2.We damaanad waqtiga, tayada iyo tiro si adag loo fuliyo shuruudaha heshiiska.
3.Professional iyo kooxda qibrada leh injineer si loo hubiyo in design sare ee qaab-dhismeedka iyo korontada.
4. Waxaan leenahay design badan oo kala duwan sida ay macaamiisha biibiile. Haddii qalabka our halkan ma joogo ilaa codsigaaga, ka dibna waxaan ku qorshayso kartaa doonaa mid cusub kuu.
5.Commissioning iyo imtixaanka ka hor dhalmada.
Our Mashiinka alxanka la xidhiidha magaca sheyga loo isticmaalo alxanka ka leexdo iyo biibiile,
rotator alxanka, positioner weling, manipulater alxanka, loo isticmaalo biibiile jeestay duub, weelasha cadaadis alxanka rotator, rotator alxanka caadiga ah, taangiga iyo biibiilaha totator alxanka, mashiinka alxanka wareeg, Haydarooliga Roator Waayo, Alxanka, Qarax Sand jeestay Roll, Automatic Alxanka Rollers, Haanta rullaluistemadka Alxanka Machine , dhululubada ah tuuboyinka alxanka Rotator, Caadiga Haanta jeestay Rolls, madaxa dabada positioner alxanka stock, positioner alxanka Haydarooliga, kor positioer alxanka, positioner alxanka siman, Dhererka qabsiga alxanka Positioners, soo noqda Table alxanka positioner, soo noqda Table alxanka positioner, kaca column alxanka, Auto alxanka Boom, Haanta nadiifinayo Machine, column oo kaca, column oo Manipulator Boom, alxanka kaca column
Previous: 5000kg 3 dhidibka positioner Haydarooliga
Next: rotator alxanka Caadiga ah
1. Our spool caadiga Haanta alxanka jeestay Rolls ayaa dhamaantood la Heerka sanduuqa gacanta gacanta fog iyo control.it baydalka cagta haboon oo ammaan ah
2. Wireless / gacanta gacanta radio waayo alxanka biibiile rotators jeestay waxaa laga heli karaa, laakiin sida caadiga ah, waayo, waxaa waajib culus iyo biibiile / taangiyada dheer.
1. Haddii si hal / laba nooc alxanka rotator, ka dibna waxaan ku dari doona in kiiska alwaax faahfaahinta rakibo ee maraakiibta LCL.
2. Haddii rollers alxanka biibiile dalban tiro ku filan hal weelasha oo dhan, waxaan santuuq doonaa weel si toos ah.
3.We bixiyaan muddo guaranty 1year tayada mashiinka oo dhan.
1. shirkadda Our (Wuxi Success Makiinado & Qalabka CO., LTD) ayaa laga dhoofiyey rotators alxanka our in ka badan 30 dal oo adduunka oo dhan. stock Yurub & America waxaa laga heli karaa.
2. Halkan hoose la Haanta qaar ka mid ah soo jeestay duub alxanka sawiro ka shaqeeya oo dhan waa ka our macaamiisha warcelin goobta shaqada.
Mexico 30T fur hogaanka caadiga alxanka biibiile jeestay rollers
ITALY 40T iyo 100T Bolt qabsiga ROTATORS alxanka taangiga
ROLLERS alxanka America 40T CONVENTIONAL- biibiile SHAQAYNTA weelal CULUS.
8 × 8 Mitir manipulator Alxanka
1 × 1 Meter Alxanka manipulator
80T Self simaya Rotator
5000kg Head & dabada positioner stock